साढे १९ हजार मत गन्दा... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
साढे १९ हजार मत गन्दा जनार्दन झन्डै १२ मतले अगाडि
विना विभागीय मन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) आफ्ना प्रतिपर्धी भन्दा झन्डै तेब्बर बढी मत अन्तरले अगाडि रहेका छन्।
३० हजार ३ सय ७७ मत गणना हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री शर्मालाई १९ हजार ६ सय ३७ मत प्राप्त भएको रुकुम पश्चिमका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कमलमणि देवकोटाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार शर्माका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसको तर्फवाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार गोपाल जी जंग शाहलाई जम्मा ७ हजार ७ सय ९८ मत मात्रै प्राप्त भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मुसिकोटमा जारी मतगणनाको पछिल्लो परिनाम अनुसार मन्त्री शर्मा झन्डै तेब्बर मत अन्तरले अगाडि देखिएका छन् । पुरानो राप्तीको पहाडी जिल्ला रुकुम टुक्रिएर दुईवटा जिल्ला निर्माण भएपछि रुकुम पश्चिम भने प्रदेश नं. ६ मा परेको छ । रुकुम पश्चिममा कुल ८४ हजार ३२ मतदाता रहेकोमा ५५ हजार ६ सय ४५ मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत देवकोटाले बताए । अब त्यहाँ आधा भन्दापनि कम मत गणना गर्न बाँकी रहेको छ । रुकुम पश्चिममा प्रत्यक्ष तर्फको अन्तिम परिनाम शुक्रवार मध्यरात सम्म आइपुग्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत देवकोटाले आँकलन गरे । यहाँ पहिलो चरण अन्तरगत मंसिर १० गते निर्वाचन भएपनि दुईवटा मतदान केन्द्रका मत पेटिमा आगो लागेपछि फेरि मतदान भएको थियो ।
त्यसैगरी रुकुम पश्चिमको प्रदेशसभा १ मा माओवादी केन्द्रका रातो कामीलाई ९ हजार ६ सय ४ मत प्राप्त हुँदा काँग्रेसका उम्मेदवार कृष्णबहादुर रोकायालाई ४ हजार २ सय ७५ मत प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पनि माओवादी केन्द्रकै अग्रता रहेको छ । माओवादीका गोपाल शर्मालाई ९ हजार १ सय ३३ मत प्राप्त हुँदा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई ४ हजार ३ सय ६६ मत प्राप्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २२, २०७४, ०२:१४:५९